ठूला वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरू विरोधमा नियन्त्रण गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
ठूला वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरू विरोधमा नियन्त्रणमा छन्
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	4 मई 2019 मा	• 11 टिप्पणिहरु
म धेरै वर्षको लागि लेखेको छु कि सबैभन्दा प्रसिद्ध विकल्प मिडिया वेबसाइटहरू आफ्नो हातको पछाडिमा छन् र खेलमा आफ्नो काम पूरा गर्नुहोस्, जसमा सम्पूर्ण बलका विभिन्न विचारहरू र विचारधाराहरू फिल्ड भइरहेका छन् र फाइदाहरू र विरोधाभासहरूमा भरिएका छन्। त्यो दलितता भनेको समाजमा उच्च भोल्टेजमा प्लस र माइनस पल्सहरू राख्न आवश्यक छ। यो जान, बेवास्ता प्रोग्रामिंग र धारणा प्रबंधन को साझा संग जानबूझकर निर्मित निर्मित डिस्फर्म को एक खेल हो। मुख्य सेवाहरू गोप्य सेवाहरू र अन्य गोपनीय संस्थाहरू हुन्। यो अमेरिकामा मात्र होइन, तर नीदरलैण्डमा र वास्तवमा सबै देशहरू विश्वभर मात्र लाग्दैन। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ र यसैले केही प्रमाणहरू देखाउन उपयोगी छ।
आउनुहोस् कि कसरी एलेक्स जोन्स वेबसाइट Infowars.com सँग काम गर्दछ, उदाहरणका लागि।
Disinformation कम्पनी जडान
तलका वृत्तचित्रको व्याख्या हो यो लेख, जसलाई मैले तल अनुवाद गरेको छु। यो 'द डिनिफोन्टिभ कम्पनी' र एलेक्स जोन्ससँग सम्बन्ध भनिने कम्पनीको बारेमा हो।
प्रसिद्ध शोर साजिशता सेलिब्रिटी एलेक्स जोन्स, को एक वृत्तचित्र सहित, को काम जस्तै अन्त्यग्राम: ग्लोबल एन्लेभाइभमेंट र न्यू वर्ल्ड अर्डरको लागि ब्लिप्रेट र उनको पुस्तक 1984 को जवाफ 1776 हो, वितरित र / वा Satanist र Alleister Crowley समर्थक रिचर्ड मेट्जर द्वारा कम्पनी को डिफिनिविटी कम्पनी भनिन्छ, जो एक कम्पनी हो जसले टेक्निक-पेजहरु र ट्राफेनमेन्टहरु जोड्दछ। मेट्जर एक डिभिजन, डाइनिफोर्निया कम्पनी र उनकी वेबसाइट डिसिनोफोनिक नामक टिभी कार्यक्रमका प्रेन्टर थिए, जसमा 'सबै चीज तपाईं जान्दछन्' गलत छ, जसलाई हालका मुख्य शीर्षकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र कथित साजिश सिद्धान्तहरू, आविष्कारवाद, राजनीति, समाचार, विसंगति र आरोपित विनाशकारी।
Metzger स्वीकार गर्दछ कि उनले आफैलाई एक युवक देखि "warlock" को रूप मा पहिचान गरे र उनले [केनेथ] एगर (Crowley's magick को प्रयोग गरे एक Crowleyan फिलिम निर्माता) को काम को ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे। उनको प्रभावको कारण आंशिक रूपमा मेटजरले फिल्म उद्योगमा आफ्नो क्यारियर महत्वाकांक्षाहरू र उनीहरूको आफ्नै (भीड) म्यागिक रुचाइएका टेलिभिजनका साथ टेलिभिजनका लागि संयुक्त रूपमा प्रयोग गरे। "गुस्सा, क्रुली-प्रेरित भूमिगत चलचित्रहरूको कुख्यात निर्माता, लायर्ल कन्या संगीतकारहरूको सञ्जाल, प्रोफेसर, सदस्यहरू थिए। मानसन परिवार र Satanskerk। अन्त मा, Meztger डिफिनिविटी कम्पनी को "magick उद्यम" को रूप मा बतािन्छ र बताछन:
Magick - एलेस्टर Crowley द्वारा परिभाषित कला र विज्ञान को रूप मा परिवर्तन को कारण को रूप मा परिभाषित - संधै सबै डिस्काउंट प्रोजेक्ट्स को महत्वपूर्ण कोर भएको छ जसमा हामी डिस्निविटी कम्पनी मा काम गर्दछौं। चाहे हाम्रो वेबसाइट, प्रकाशन गतिविधि वा हाम्रो टिभि सीरीज मार्फत हो, यसले सकारात्मक रूपमा वास्तविकतालाई प्रभाव पार्न सक्षम हुने विचारले हाम्रो गतिविधिलाई कसरी चलाउँछ। मेरो डिफाइनमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र हाम्रा विभिन्न क्रियाकलापहरू सधैं एक जटिल जटिल हिज्जे मानिन्छ।
एलेक्स जोन्सको अलावा, डिफिनिविफिक कम्पनी पनि स्पष्ट रूप देखि प्रतिष्ठित वा साजिश-अभिव्यक्त वृत्तचित्रहरु को एक संख्या को लागि जिम्मेदार थियो, जस्तै Outfoxed: पत्रकारितामा रुपर्ट मर्डोकको युद्ध (2004), अज्ञात: इराक को बारे मा पूरी सत्य युद्ध (2004), बुश पारिवारिक कितावहरू: द बेस्ट डेमोक्रेसी मनी खरीद गर्न सक्दछ (ग्रेग पालस्ट द्वारा निर्देशित), वाल-मार्ट: उच्च मूल्यको मूल्य (2005), इराक बिक्रीका लागि: युद्ध प्रदायकहरू (2006), Slacker Uprising (2004 चुनावको समयमा माइकल मोोरको भ्रमणमा विश्वविद्यालयहरूको भ्रमणका साथ,9/ 11: सत्यका लागि प्रेस (2006),9/ 11 रहस्य (2006).
Disinfo Nation को रूप मा पनि ज्ञात, एक मेट्रोगर द्वारा आयोजित एक टेलीभिजन कार्यक्रम थियो, जो यूके मा च्यानल4को देर रात "4Later" प्रोग्रामिंग ब्लक मा दुई सीजनहरु लाई प्रसारित गरियो। C30 को लागि उत्पादित सोहह4मिनेट एपिसोडहरू अमेरिकामा स्क्यान-फाई च्यानलका लागि निर्धारित चार एक-घण्टाको विशेषमा घटाइएको थियो, तर तिनीहरूका विवादास्पद सामग्रीको कारणले प्रसारण नगर्न सकेनन्। त्यस चार शोहरु त्यसपछि डीभिडीमा रिलीज गरिएको थियो, डिसेन्फोन्कबाट प्रदर्शन गरिएको दोस्रो बोनस डिस्क, 2000 मा एक 12-घण्टा घटनाले प्रदर्शित गर्दछ, जसमा मेट्जर र म्याग्नेसन मननन, केनेथ एङ्गर, केनेटर जोलेमन, डगलस रशकोफ, मार्क पेसेस, ग्रेन्ट मोरिसन, रबर्ट एन्टोन विल्सन, टोड ब्र्ड्डन फ्हा र अन्य।
विचित्र विरूद्ध यो कुरा हो कि डिफिनिफोन्टिले सही ढंगले उत्पादन गर्न खोज्छ: विनाशकारी। एक उल्लेखनीय उदाहरण डिफर्जफोर्डको डिभोभको मटोजरको नि: शुल्क एफबीआई एजेन्सीले टेड गन्डरसनद्वारा साक्षात्कार गरेको छ जसले अमेरिकामा गोप्य र व्यापक सञ्जाल समूहको खोजी गर्ने जान्दछ जसले बच्चाहरूलाई अपहरण गर्छ र शैतानिक अनुष्ठान दुर्व्यवहार र मानव बलिदानको विषय बनाउँछ। तथापि, मेट्जरको वृत्तचित्र स्पष्ट रूपमा एक जातीय छ, डिस्कोर्डियन शैली 'हास्य' र दुवै पक्षका खेलहरू जुन रोबर्ट एन्टोन विल्सनको विशेष हो। गन्डरसनको ध्यान सीआईए र सैन्य प्रतिष्ठान भित्र दुर्व्यवहारमा छ, र उनी भन्छिन् कि दक्षिणी क्यालिफोर्नियाली सांस्कृतिक सांस्कृतिक गतिविधिको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यद्यपि मेट्जरको वृत्तचित्रले आजको उपशास्त्रमा "गहिरो गुण" को "गहिरो र अचम्म लाग्दो" दिन दाबी गर्दछ, उसले गन्डरसनको टिप्पणीलाई घृणित साटानिक विनाबहरूको रिपोर्टमा जम्पटापेसिस गर्दछ।
Metzger भिडियोले4मा ब्रिटेनको 1992 द्वारा निर्मित डिफिगरेसनको एक समान टुक्रालाई सम्झाउँछ, "Beyond Belief" को हकदार, जसले शैतानिक अनुष्ठान दुरुपयोग (एसआरए) को प्रमाण प्रदान गरेको छ। शो एन्ड्रयू Boyd, एसआरए को एक सक्रिय प्रतिद्वंद्वी र Blasphemous अफवाह लेखक को विषय मा एक पुस्तक को द्वारा आयोजित गरिएको थियो। "विश्वासभन्दा बाहिर" दुवै कानून प्रवर्तन एजेन्सी र मेडिकल विशेषज्ञहरूको विचार, साथसाथै अन्त-अस्वीकार पितृ जीवित "जेनिफर" सँग साक्षात्कार दुवै सन्दर्भमा भिडियो समावेश गरेको समूहको भागमा दावी गरे।
चित्रहरुमा एक हड्डी मान्छे मा शामिल अश्लील अनुष्ठान, उनको मासु मा अनुष्ठान प्रतीक कटौती, एक नग्न महिला को बिरुद्ध र बलात्कार, र एक अन्य उपन्यास र संभवतः औषधीय महिला मा एक स्पष्ट गर्भपात शामिल थियो। अर्को दृश्यले जवान केटीलाई फ्याँकिएको छ र हिंसक यौन कार्यमा संलग्न छ। यी क्रमहरू स्पष्ट यौन सम्बन्धको रेकर्डिङसँग साक्षात्कार गरिएको छ।
त्यसैले एलेक्स जोन्सले एलेन्डर क्रोलीको जादुई विजार्ड प्रविधि र मिडियामा उनीहरूको आवेदनमा विशेष गरी राखेका व्यक्तिलाई लिङ्क गर्न सक्छन्। एलेस्टर Crowley एक को संस्थापक छ तन्त्रमन्त्रमा छालाले थिमामा भनिन्छ। हामी एक शिक्षाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं कि Crowley दावी एक आध्यात्मिक द्वारा प्रेरित कairo मा प्रेरित थियो जहाँ उनको पत्नी एक माध्यम को रूप मा कार्य गरे। Crowley को शिक्षण मिस्र पौराणिक देवताहरूमा आधारित छ। पुरातन मिथकों ईश्वरीय शक्ति को ग्रहहरु लाई श्रेय दिइयो। मैले अक्सर शनि उपासनालाई संकेत गरें कि हामी सबै वरिपरि हामी देख्छौ। यो पनि क्रलीको शिक्षणमा प्रतिबिम्बित छ। Crowley गोल्डेन डन र आरटीटी संगठनहरूको सदस्य थियो (Ordo Templi ओरिएंटिस)। पछि एक Templar संगठन हो जुन यससँग जोडिएको जस्तो देखिन्छ मिस्र फरोन। क्रिस मिस्र पौराणिक कथामा सजिलै संग व्याख्या गरिएको छ।
मैले यो पनि वर्णन गरेको छु कि म कसरी विश्वास गर्दछु विश्व संसारमा फेरोनिक रक्तलाइन द्वारा नियन्त्रित छ। यो कुनै संयोग छैन कि Aleister Crowley सबै प्रमुख राजनीतिक विश्व नेताहरु संग व्यवहार गरे। उहाँ बीटल्स सर्गेन्ट मिर्च थिए र वास्तवमा सम्पूर्ण संगीत, टिभी र चलचित्र उद्योगलाई प्रभाव पार्नुभयो। Crowley The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin को महान नायक थियो, तर पनि, उदाहरणका लागि सडक खसेको छ। कोलीले सिसिलीमा आफ्नो आफ्नै मठको स्वामित्व राखेका थिए र रिपोर्टमा बच्चाहरूसँग खुल्ला यौन सम्बन्ध थियो। Crowley ले एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति हासिल गर्न यौन अनुष्ठान प्रयोग गर्यो। उदाहरणका लागि, Crowley's Rituals मध्ये एक "इरोटो-कमोटोस लोसिटिटि" हो जसको अर्थ स्वतन्त्र रूपमा अनुवाद गरिएको छ "सेक्सको नतिजाको रूपमा शिकारको कम्युटोज राज्यको माध्यमबाट राहत प्राप्त गर्न"। यसले लागि केही उत्साहपूर्ण आवाज सार्न सक्छ थिईस पाठक, तर कमेटोस अवस्था बिल्कुल निर्दोष होइन। तपाइँले अनुष्ठानको विवरण पाउनुहुनेछ यहाँ र, संक्षेपमा, यो तथ्यलाई तल आउँछ कि एक केटाकेटी यौन यौन दुर्व्यवहार गरिन्छ जब सम्म कि उनी केहि प्रकारको कमटोजोज र उनको मनबाट शरीरबाट असक्षम हुन्छन्। यो विशुद्ध शिशुयुद्ध समूह बलात्कार एलेस्टर Crowley को धेरै यौन रत्न मध्ये एक, धेरै धेरै हस्तियों द्वारा पूजा गर्ने मानिस हो।
Crowley संगीत, टीवी र फिलिम उद्योगमा आफ्नो जादूको प्रविधि स्थानान्तरण गर्न सक्षम थिए। त्यसपछि तपाइँ चीजहरूको बारेमा सोचेको छ, जस्तै 'रिवर्स स्प्याच' र धेरै अन्य प्रविधिहरू। केहि को यो जादुई (कोर्ली द्वारा 'मैकिक' भनिन्छ) केहि प्रविधीहरु को उदाहरणहरु को लागि बीटल्स र अन्य बैंड देखि गीतहरुमा पाया जान सक्छ। चुम्बनले सबैलाई भ्रामक प्रविधि र भित्री अनुष्ठान र प्रोग्राममा प्याक प्रतीकत्वको संयोजनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ; सामान्यतया आँखामा देखिने छैन। वास्तवमा, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि Crowley म्याकिक सम्पूर्ण संगीत, टिभि र चलचित्र उद्योगको लागि मानक बन्नुभयो।
जिमी Savile, यूकेको सबैभन्दा ठूलो टिभि व्यक्तित्व र श्रृंखला बाल दुर्व्यवहार पनि आफूलाई एक आविष्कारवादी मानिन्छ जो एलेस्टर Crowley को पछाडि पछि लागे। Savile दुर्व्यवहार बच्चाहरु र असक्षम मा अक्षम हुन सक्षम हुन बेलायत मार्फत यात्रा गर्न सक्षम थियो। सालिलेट अस्पतालको मृत्युदण्डमा शरीरमा समेत नेक्रोफिलिया भनिन्छ। अक्टोबरमा 84 को उमेरमा अक्टोबरमा 2011 मा मृत्यु भएको अक्टोबरमा सन् 1 997मा अक्टोबरमा मृत्यु भएको हो। प्रहरीले जनाएको छ कि कम्तिमा 450 पीडितहरुलाई आठ देखि 47 सम्मको मृत्यु भएको थियो।
साधारण तथ्य यो हो कि एलेक्स जोन्स जस्तै कसैले कुनै डिस्निभेट कम्पनीको संस्थापकसँग जोड्न सक्दछ, वास्तवमा उनलाई क्रोको शिक्षामा लिन्छ। तपाईं यसबाट कटौती गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी (pharaonic) विश्व आदेशको एक एजेन्टसँग काम गर्दै छौं।
राष्ट्रिय नीतिका लागि परिषद् (सीएनपी) र जॉन बिरच सोसायटी (जेबीएस) सम्बन्ध
एलेक्स जोन्सले राष्ट्रिय नीति (सीएनपी) र जॉन ब्रेच सोसाइटी (जेबीएस) को परिषद हुनुका साथै केही ठूला विचार टैंकहरूसँग धेरै स्पष्ट रूपमा लिङ्क गर्न सक्छन्।
CNN 1981 मा टिम लाहाई र पॉल वाइरिच द्वारा स्थापित गरिएको थियो। लाहा एक अमेरिकन प्रचारक हुन्, स्पीकर र ईसाई पुस्तकहरु को लेखक। उहाँ प्रचारशास्त्रीय ईसाईयतमा हुनुहुन्थ्यो र ईसाई लेखक बेवर्ली लाहेईसँग विवाह गर्नुभयो। Weyrich एक राजनीतिक कार्यकर्ता, टिप्पणीकार (सीआईए) सोच्दै थिए र सबै प्रकारको विचार टैंक, जस्तै हेरासत फाउंडेशन, नि: शुल्क कांग्रेस फाउन्डेशन र अमेरिकी विधानसभा एक्सचेंज फाउन्डेसन। त्यसैले Weyrich स्पष्ट रूपमा थाह थियो कि उनले पैसा प्राप्त गर्न र यदि हामी ठूलो पैसा गन्ध गर्छौ भने, हामी वास्तवमा जान्दछौ कि कसले खेल नियन्त्रण गर्दछ। सीएनपी एक प्रकार को अमेरिकी Bilderberg हो। यसका सबै सभाहरू गोप्य छन्। कुनै पनि चीज बाहिर निकाल्दैन। यो संगठन ज्युडो-क्रिश्चियन शियोनस्टस्टहरूले स्थापना गरेको 'सत्य खोजी' को लागि एक प्रकारको छाता बनाउँछ।
त्यसपछि तपाईंसँग दायाँ-विंग जन ब्रेक सोसाइटी (जेबीएस) छ। जॉन ब्रेच सोसायटी एक अमेरिकन दायाँ-विंग कट्टरपंथी समूह हो, जो कि एनएनएनएक्सक्समा व्यवसायी-कार्यकर्ता रॉबर्ट डब्ल्यू वेल्च द्वारा बनाईएको छ। को रूप मा मुख्य रूप देखि विरोधी कम्युनिस्ट प्रचार र लॉबी संगठन। त्यसोभए हामी सधैं ठूलो पैसा देख्दैछौं। त्यो वास्तवमा नै संदेह बढाउनु पर्छ। वेल्चले "गुप्त, बहुनिष्ठ संगठन" स्थापना गर्न चाहन्थे जुन "सबै स्तरहरूमा पूर्ण अख्तियारको अधीनमा काम गर्दछ।"
तपाई पढ्नुहुन्छ यो अनलाइन बुक त्यस पछि पत्ता लगाउन कसरी एलेक्स जोन्सहरू यी संस्थाहरूसँग जोड्न सकिन्छ। तथापि, तल रहेको वृत्तचित्रमा राम्रो नदेख्न यो धेरै अधिक सल्लाहकार छ। यदि, तपाईले साँच्चै यो सबै अध्ययन गर्न समय लिनुभएको छ भने, तपाईं कुलीनको जेबमा वैकल्पिक मिडिया विपक्षी बल क्षेत्र कसरी कति राम्रो देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, मलाई आशा छ कि तपाईं यो महसुस गर्नुहुन्छ कि केहि स्वतन्त्र स्रोतहरू पाउन सकिन्छ। त्यसैले म यो सिफारिस गर्दछु यो लेख नेदरल्याण्ड्सको अवस्थाबारे फेरि पढ्न। आशा छ कि यसले यो पनि तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ कि साँचो स्वतन्त्र लेखक (नेदरल्यान्डमा मात्र एक मात्र यो सबैलाई उठाउने) को समर्थन गर्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण छ।
कृपया प्रतिक्रियाहरू पढ्नुहोस्, जसमा तपाइँ डच वेबसाइटहरूसँग सम्पर्क पाउनुहुनेछ।
स्रोत लिङ्क सूची: conspiracyschool.com, scribd.com
फेसबुकले इन्भोर्स र अन्य जस्ता धेरै ठूला वैकल्पिक समाचार साइटहरू रोक्न: यो साइटलाई पनि अधिसूचित गरिएको थियो
रबर्ट जेसेन्सन र अर्नोल्ड करस्कन्सको ब्लैक बुक एनओएस न्यूज 'नियन्त्रण विरोधी प्रदर्शन: बगैचामा यो छैन
पोजिटिभ्मवाद र आशावाद!
क्रांति सुरु भएको छ!
ट्याग: aleister crowley, एलेक्स, CNP, कम्पनी, राष्ट्रिय नीतिको लागि परिषद्, विनाशकारी, नियन्त्रित, infowars, JBS, जिमी, जन बिच सोसायटी, जोन्स, विरोध, रिचर्ड मेटजर, Savile
4 मई 2019 मा 23: 17
तपाईं यसलाई युद्ध (टी) त्रुटिमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई एक शत्रु बनाउनुहुन्छ, यसलाई अल कायदा / आईएसिस भनिन्छ, जसले तपाईंलाई हस्तक्षेप लागु गर्न वैधता प्रदान गर्दछ।
Crowley / RTD को फिर्ता लौटे एलेस्टर कोलोले को पिता को प्लीमाउथ भाइयों को रूप मा एक पंथ थियो .यो समूह ईसाईल ईसाइयों को अमेरिकी मुख्य भूमि मा प्रभावशाली बनाउन मा महत्वपूर्ण छ। एक बाइबिल उत्पादन गरेको छ जुन सबैले ईश्वरत्वलाई स्वर्गमा राख्नुहुन्छ
ट्राम्प र तिनको शेरियोस्टको अन्त-समय आन्दोलन आजको समूहले (आध्यात्मिक रूपमा) समर्थन गर्दछ।
4 मई 2019 मा 23: 44
तपाईंको महत्त्वपूर्ण थपको लागि धन्यवाद। म भर्खरै मलाई ई-मेल द्वारा पठाएको प्रतिलिपि प्रतिलिपि गर्नेछु। यसको लागि धन्यबाद।
सीएनपी को बारे मा तपाईंको नवीनतम लेख एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु हो, जानकारी मूलतः योएल vd Reijden को वेबसाइट बाट छ:
र त्यहाँ पनि हामीले लिङ्कमा नियन्त्रण गरिएको अलपत्रमा आउँछौ। नीदरल्याण्डमा मिडिया काट / जेरोन हुग्वेइज / निबुरु आदिको बारेमा मिडिया
4 मई 2019 मा 23: 55
तपाई स्वागत छ! 😀 र तपाईंको लेख जुन म कुरा गर्दैछु
ज्याक एब्रमोफ र उनको सम्बन्ध रबर्ट रुबस्टाइनन र 'रोल्ड नेल'
अप्रिल 3, 2014 मा पोस्ट गरियो
5 मई 2019 मा 00: 08
5 मई 2019 मा 00: 12
यस लेखमा म मार्टिन व्रिजल्याण्ड विनाश र भ्रामक वितरक जेरोन हग्वेवीज को सम्बन्ध को बारे मा बताईएको छ।
इन्टरनेटमा मार्टिन व्रिजल्याण्डको बारेमा फेला पार्न सक्ने सबै लिबिल र विद्रोहको स्रोत जेरोन हुगोभाइजले आफ्नो पहिचान कहिल्यै लुकाएनन्। अहिलेसम्म पनि अनौपचारिक सन्देशहरूमा अनलाइन भेट्टाउनका अधिकांशहरू ज्यारोनबाट आउँछ र मार्टिन व्रिजल्याण्डका लेखहरूको आस्थालाई स्पष्ट पार्ने स्पष्ट लक्ष्य थियो। यो अझै यसको प्रभाव छ किनकि Google लाई लिङ्कहरू हटाउन इन्कार गर्दछ र किनभने मेरो घोषणा नपढेको छ।
पाठहरू अझै अनलाइन पाउन सकिन्छ; वेबसाइट 'hoaxwiki' मा अन्य चीजहरू बीचमा Google खोज इञ्जिनमा उच्च देखिन्छ। मैले यस पछाडि हटाउने कुनै पनि ऊर्जालाई नरोक्ने निर्णय गरेको छु। सबै पछि, मैले व्याख्या गर्न थाल्छु कि विवाहित कहाँ छन्, प्रश्नका वेबसाइटहरू तुरुन्त चीजहरू समायोजन वा हटाउन फेरि कलममा पर्छन्। उदाहरणको लागि, अतीतमा यसले मैले भन्यो कि मैले पहिलेको नियोक्ता स्क्यान गरेका थिए। यद्यपि, जब मैले आफ्नो साइटमा प्रमाण प्रकाशित गरेँ कि मैले यस कम्पनीलाई राम्रो र अनुकूल तरिकामा अलविदा भने, त्यो कथा छिट्टै हटाइयो। यो जान्दर्भिक वितरित डिस्नोफो संग समस्या सबै भन्दा माथि छ जुन नयाँ पाठकहरुलाई विश्वास गर्न इच्छुक छ र त्यसैले बस छोड्न छोड्नु हुन्छ। त्यस अर्थमा, यो एक महत्वपूर्ण लेखक काट्न र आफ्नो प्रतिष्ठा को बर्बाद गर्न एक प्रभावी तरीका हो।
त्यतिन्जेल मैले थुप्रै मुद्दाहरूलाई मेरो मामला उठाउन र मेरो घोषणा सुचारु गर्न राज्यमा मुकदमा लिन आग्रह गरेको छु। अहिलेसम्म कुनै पनि राज्यको इन्कार गर्न आफ्नो औंलाहरू जलाउने हिम्मत जस्तो देखिन्छ। उनी अझै स्पष्ट प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्छन्, किनकि धेरै विस्तृत र विस्तृत घोषणामा सशस्त्र प्रमाणहरू मात्र ध्यानमा राखेन। यो तथ्यको कारण हुन सक्छ कि यो स्पष्ट छ कि राज्यले यो अनलाइन भ्रामक र हानिकारक मा दृढ हात छ? मैले पनि मेरो मामला स्वेन ह्यूलेलेन संग जमाएको छ कि उसले उनीहरुलाई आफ्नो औंलाहरु जलाउन हिम्मत गर्दछ।
यो सधैँ मलाई आश्चर्यचकित भएको छ कि यो जेरोन हग्वेविजिजले कसरी सबैको साथमा प्रतिबन्ध लगाए र हानिकारक बनायो। विशेष गरी यो स्पष्ट रूपमा दण्डनीय छ। मैले पनि आफ्नो सरकारको पास प्रकाशित गरें र यो स्पष्ट थियो कि जेरेनले राज्यको लागि काम गरे। एक क्षणको लागि जेरोन रडार र ग्यापस सर्किटमा गायब भएको जस्तो देखिन्छ, मलाई भनिएको थियो कि उनको क्यान्सर हुने थियो। अब म वास्तवमा गपशपमा विश्वास गर्दैनु, तर यो उल्लेखनीय थियो कि उहाँ प्रसिद्ध ज्ञात साइटहरूमा अझ धेरै सक्रिय थिएन जुन मुख्यतः मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई ब्ल्याक गर्ने उद्देश्य थियो (र यो पूर्ण काम गर्दै थिए)। म यसैले धेरै आश्चर्यचकित हुन्थे जब एक पाठकले हाल मलाई नाओमी हुग्वेइज नामको एक ट्विटर खातामा भने।
के सम्भवतः जेरोन उनको पहिचानको बारेमा यति चिन्तित थिएन? के यो वास्तवमा जेरोन हो? के उनले आफैलाई बढाए? गंभीरतापूर्वक? मैले सोधे कि यो मजाक थियो। यसले मेरो मामला कानुनी रूपमा थप रोचक बनाउनेछ! के तपाईंले एक व्यक्ति विरुद्ध घोषणा गरेको छ भने के हुन्छ र त्यो व्यक्तिले लिङ्ग रिसेन्जिट गुमाएको छ? विचित्र!
जेरोन सधैं एलेस्टर Crowley आरटीटी संगठन को शीर्ष मा रहेको छ। यस्तो लुसिफेरिया गोप्य समाज भित्र, ट्राजेगेंडरवाद एक साधारण साधारण मुद्दा जस्तो देखिन्छ। यो पनि देखिन्छ कि यी समाजहरूले विश्वव्यापी 'लिंग तटस्थ' र 'ट्रान्सगेंडर' मार्केटिंगलाई बढावा दिन्छ। म यस विषय मा मेरो लेख मा व्यापक रूप देखि व्याख्या गरेको छ, जसमा मैले प्रमाणित गरे कि यो मुख्य रूप देखि विचार को कारण हो कि लुसिफर अस्पष्ट छ। लसुफेरियन बाफेरो बक्सिंग प्रतीक को थाहा छैन जुन छाती र एक फोलोस संग एक अनुहार को प्रतिनिधित्व गर्दछ। सायद यो सर्वोत्तम सन्दर्भ 2014, कन्चेता Wurst मा यूरोवीजन गीत प्रतियोगिता को पुरुष / महिला विजेता द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। उदाहरणको लागि, विस्तृत विवरणको लागि यो लेख पढ्नुहोस्। त्यसैले यो वास्तवमा तस्वीरमा फिट बस्छ जुन जेरोनले आफैले परिवर्तन गरेको छ।
यसबाहेक, जेरोन (अब नाओमी) फेरि इन्टरनेटमा सक्रिय छ र वेबसाइट jalta.nl मा अतिथि लेखक बनेको छ। जब मैले यो पत्ता लगाए, मेरो विचार म मूर्ख भइरहेको थियो चाँडै गायब भयो। यो साँच्चै साँचो हो: जेरोन अब नाओमी हो! जेरोन यो ट्रान्सगेंडर अनुभव र उनको वातावरणको प्रतिक्रियाको बारेमा याल्टामा प्रकाशित गर्दछ।
सायद मलाई नौलो मा उनको नयाँ पदमा हरेक सफलता मात्र नाओमी चाहियो। चल्ने आशा गर्दछ कि LGBTQ प्रचारले विशेष गरी धेरै लिङ्गलाई उनीहरूको लिङ्गमा शंका गर्न र सुखद पुनरुत्थान प्रक्रिया बारे सोच्न सुरु गर्नका लागि विश्वस्त हुन सक्छ। जेरोन तिनीहरूको चमककारी उदाहरण हो। यो सुन्दर रमाइलो जस्तो देखिन्छ। साथै पावलले पबेर कुकहोउमा हामीले पहिले नै देखेका छौं कि तपाइँ कसरी राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि HEMA मा तपाइँ पहिले नै तपाईंको लुगा किन्न सक्नुहुनेछ।
मैले सोचेँ कि यो शर्मनाक छ कि म फेरि फेरि जेनेन चुनौतीलाई म्यान-टु-मेनलाई बलियो दायाँ कुनामा दिन वा उनको बलहरू भित्र धेरै लात लगाउन चुनौती दिन्छु। मुछिएको! तर, मैले पहिले नै यो क्रोधित पारिएको थियो र मलाई महिला दुर्व्यवहारको आरोप लगाईएको छ (यद्यपि जेरोनको हातले, तर एकै ओर; जेरोन अब लामो छैन), त्यसैले म प्रेममा नाओमीलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु: राम्रो बच्चा देखिन्छ हामी फेरि फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि तिमी महिला हो?
5 मई 2019 मा 00: 23
मिती मार्टिन छ यो धेरै गम्भीर छ ..
"म यो मेरो नीदरल्याण्डमा भइरहेको विश्वास गर्न सक्दैन"
* यहाँ को लागि नयाँ मीडिया क्षेत्र को माध्यम ले एक नयाँ अद्यतन को लागि विश्व को तीन वर्ल्ड *
मानेशिया समूह पट / ओटांस / रुबिन्डिन्टेन / कट / क्र्रोल / एरमोमोफ / हग्वेवीज 'विरुद्धको अभियान सुरु हुँदा मार्टिनले एक्सएनएमएक्स मार्चमा उनको' आवरण 'सम्म डेमलिङ्कको घटनामा एकैचोटि प्रसोधनमा थप वा कम रिपोर्ट गरे।
व्रिडल्याण्ड को प्रोटोनियो त्यो क्षण बाट छिटो गुलाब र घोषणाको साथ दु: ख उच्च पुग्यो कि जेरोन हग्वेईजीजले अफगानिस्तान मा माफिया समूहको पनि भाग हो।
5 मई 2019 मा 00: 52
हो, मैले पहिल्यै हुग्भाइजिजको बारेमा यो सन्देश पाएको छु जसले भन्छ कि उसले जेरोन / नाओमी राम्रोसँग चिन्छ।
मलाई यकीन छैन कि यदि यो एक जाल होइन र यसैले पठाएको सूचना सही छैन भन्न सक्छ, तर मैले प्राप्त जानकारीको विवरण दिए, यो गम्भीर स्रोत जस्तो देखिन्छ।
निर्दोष जेरोन (अब नाओमी) को कारण यस्तो महान् वकील भाडा लिन सक्छ जस्तै हम्सस्टीन को निजी क्षेत्र मा झूठ बोल्छन, लेखक को अनुसार।
5 मई 2019 मा 02: 05
सेक्स सिन्च निश्चित रूपमा यो भाग हो, हेर्नुहोस् हाल नै NXVIM कलेजमा के भयो, एक सामान्य संदिग्ध ब्र्रोनफन द्वारा वित्त पोषित जो एपिस्टीन र फेरि ब्रेन्सनसँग जोडिएको हुन सक्छ (एक नाममा वर्जिन रेकर्ड क्याप्सन) क्लासिकल कम्प्रोमैट विधिहरू
https://www.henrymakow.com/2019/04/ सियोनीस्ट-गोदाफेर-शमूएल-ब्र्रोनफ्यान% 20.html
5 मई 2019 मा 07: 27
ठीक छ, यो एक आश्चर्य को रूप मा नहीं आउँछ कि सिक्न को लागि एलेस्टर Crowley 'अंग्रेजी' गुप्त सेवा को सह कामदार थियो, जासूस द्वारा। त्यस कारणको लागि तपाईं धेरै सजाय, विचलित चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यसको साथमा जान सक्नुहुन्छ।
5 मई 2019 मा 09: 52
यो शब्दहरूको लागि धेरै बिरामी छ कि सबै मानिसहरूले आफ्नो आत्मा सबैलाई मूर्ख बनाउन बेचन्छन्। मलाई आश्चर्यचकित भएन कि तिनीहरू अन्ततः यी सबै झूटहरूबाट बिरामी हुन्छन्।
यो समूह जुन भाग लिँदैन, अस्वीकार गरिनेछ, तर मलाई यकीन छ कि यो समुह जित्नेछ!
मार्टिन माथि राख्नुहोस् र तपाईलाई बिर्सनु हुँदैन कि समूह धेरै ठूलो र बढ्दो छ र उनीहरूको सत्यता र तपाईंको नाम झूटो आधारमा आधारित छ भन्ने महसुस गर्दछ।
5 मई 2019 मा 10: 00
त्यो रणनीति हो। सबैलाई ड्राइभ क्षेत्रबाट बाहिर ड्राइभ गर्नुहोस् जुन जाँच गरिएको छैन। जेरोन हग्वेविज (धेरै समयको साथ मिका कटको छिमेकी) को उनको मार्टिन व्रिजल्याण्ड को जलाशय को जलाने को प्रयास को लागि उनको वेबसाइट (जसको स्वापियू मुख्य मुख्य भाग थियो) को उपयोग गर्न को लागी अनुमति दिइएको थियो। मिसा काट पनि प्रकट भएको थियो, तर मौलिक रूपमा हानिकारक थिएन।
हामी सँधै जाँच्ने वेबसाइटहरू हेर्छौं कि उनीहरूले (नियन्त्रण गरिएको) आक्रमण गरिरहेको छ, तर त्यो एक उद्देश्य कार्य गर्दछ; अहिले उनीहरूको फेसबुक पृष्ठहरूको निष्क्रियता संग। यी वेबसाइटहरू, जस्तै थिए, क्रोधित च्यानल र अनुयायीहरूलाई निष्क्रिय राख्नुपर्छ।
यो एक बहु-आयामिक गेम हो (जस्तै डोकू राम्रो देखिन्छ) र योमा मानव मानसिकताका सबै तत्वहरू सञ्चालन गरिन्छ र हरेक ऊर्जालाई चढाएको छ।
« फेसबुकले इन्भोर्स र अन्य जस्ता धेरै ठूला वैकल्पिक समाचार साइटहरू रोक्न: यो साइटलाई पनि अधिसूचित गरिएको थियो
नियन्त्रक माध्यमिक माध्यमका अधिक प्रमाणका साक्षीहरू जसले मानेसर व्रिजल्याण्ड (नाओमी हग्वेवेजिज) आक्रमण गरे। »
कुल भ्रमण: 12.453.137
डर्क विरसुमको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
के अब अमेरिका र इरानको बीचमा छिट्टै युद्ध हुने छ?
पूर्व डिज्नी च्यानल तारा .्कले हलिवुड पेडोफाइलहरूले दुर्व्यवहार गरेको बताउँछन्
Riffian op के अब अमेरिका र इरानको बीचमा छिट्टै युद्ध हुने छ?
मार्टिन भिजल्याण्ड op के अब अमेरिका र इरानको बीचमा छिट्टै युद्ध हुने छ?
क्रिस-बच्चा op के अब अमेरिका र इरानको बीचमा छिट्टै युद्ध हुने छ?
SandinG op डर्क विरसुमको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
1.635 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्